Dinika politika any Taolagnaro : mitaky ezaka amin’ny fitondrana ny Vondrona eoropeanina | NewsMada
Dinika politika any Taolagnaro : mitaky ezaka amin’ny fitondrana ny Vondrona eoropeanina
Nanomboka, omaly any Taolagnaro, ny dinika politika, iarahan’ny fitondrana amin’ny alalan’ny filoha Rajaonarimampianina otronin’ny Praiminisitra Ravelonarivo sy ny avy amin’ny Vondrona eoropeanina (UE). Mbola mametraka fepetra hatrany ny mpamatsy vola.
Tsy mbola mahafa-po. « Ny fampidiran-ketra, fahamarinan-toerana politika, ny ady amin’ny kolikoly… Mitaky ezaka amin’ny fitondrana ny lafiny politika sy ny sosialy… », hoy ny eo anivon’ny Ue, Antonio Sanchez–Benedetto, omaly amin’izao dinika politika any Anosy izao. Nanambara kosa ny filoha Rajaonarimampianina fa samy resy lahatra amin’ny fampandrosoana ny UE sy ny fitondrana, nialoha ny fanokafana ny dinika. Nambarany fa efa efa misy ny dingana vita amin’ny ady amin’ny kolikoly… « Efa voarakitra an-tsoratra ny novambra teo ny fiaraha-miasan’ny roa tonta ato anatin’ny 5 taona », hoy izy.
Nialoha izany, vita sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa eo anivon’ny orinasa QMM, mitrandraka ny fasimainty any an-toerana, sy ny fitondrana, ho amin’ny fampandrosoana ny faritra Anosy. « Zava-dehibe ny fanajana ny lalàna sy ny fiaraha-miasa mirindra, samy ahitan’ny rehetra tombontsoa… Manana anjara toerana amin’ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina », hoy ihany ny filoha Rajaonarimampianina.
Ankoatra izany, mbola nohamafisiny indray ny tokony handalana ny fihavanam-pirenena ka nilazany fa tsy misy fampandrosoana raha tsy eo izany kolontsaina izany. Nampahatsiahy hatrany ny filoha fa tsy maintsy tanterahina ny fanamby ara-toekarena sy sosialy ka tsy diso anjara ny any amin’ny faritra Anosy.
Mijery lavitra ny fitondrana
Ny maraina kosa, nitokana ny ivontoerana ambony momba ny teknolojia ny filoham-pirenena ka nanteriny fa mijery lavitra ny fitondrana raha momba ny tanora sy ny fanabeazana. « Tsy ny anio ihany… Mijery ny tanora ny filoha ary hatrany ifotony izany ka hatreny amin’ny ambaratonga ambony. Ho reharehan’ny firenena sy ny tenanareo ny fandraisana anjanareo amin’ny fampandrosoana », hoy ihany izy.
Notoloran’ny filoha Rajaonarimampianina solosaina dimy, sy « imprimante » iray ary « video » iray miaraka amin’ny « panneau solaire », hampihodinana ireo. Hahazo herinaratra avy amin’ny masoandro koa ny tanàna tsy lavitra ny sekoly.
Nomena fitaovana ara-panatanjahantena koa ny tanora.